SuperTux 0.6.3 dia tonga miaraka amin'ny fanohanana WebAssembly, fanatsarana ary maro hafa | Ubunlog
Aorian'ny fandrosoana herintaona sy tapany nambara ny fandefasana amin'ny dikan-teny vaovao amin'ny lalao mahazatra "SuperTux 0.6.3" mampahatsiahy ny Super Mario amin'ny fomba.
Ho an'ireo tsy mahalala Super Tux, tokony ho fantatr'izy ireo izany dia lalao video sehatra 2D aingam-panahy avy amin'ny Super Mario an'ny Nintendo. Rindrambaiko maimaim-poana izany. Novokarin'i Bill Kendrick tamin'ny voalohany izy io ary notazomin'ny ekipa SuperTux Developer Team.
Raha tokony ho an'i Mario, ny mahery fo amin'ity lalao ity dia Tux, ny mascot kernel Linux, na izany aza, no hany hany firesahana amin'ny Linux. Sary maro ao amin'ny lalao no noforonin'i Ingo Ruhnke, mpamorona ny Pingus.
Navoaka voalohany ho an'ny Linux, Windows, ReactOS, Mac OS X ny lalao. Ny kinova ho an'ny solosaina hafa dia misy ny FreeBSD, BeOS, ankoatry ny hafa.
Ity lalao ity dia mifototra amin'ny lalao voalohany amin'ny andiany Mario, Nintendo ary mitondra Tux amin'ny mascot Linux, amin'ny maha-mpilalao azy.
1 Inona no vaovao ao amin'ny SuperTux 0.6.3?
2 Ahoana ny fametrahana SuperTux amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Inona no vaovao ao amin'ny SuperTux 0.6.3?
Amin'ity dikan-teny vaovao an'ny SuperTux 0.6.3 ity dia ny fahafahana manangona kaody WebAssembly manelanelana hampandehanana ny lalao amin'ny navigateur web, miampy izany Efa voaomana ny dikan-teny an-tserasera amin'ny lalao.
Ny fiovana iray hafa miavaka dia izany manana fomba fametrahana mandeha ho azy ny tonian-dahatsoratra ny sakana handalo (Autotile).
Nohavaozina ny andiana “crystal” ary maro ireo sakana vaovao nampiana ho an'ny haavon'ny ranomandry.
también zavatra vaovao toy ny side bumpers no nampiharina, vato latsaka sy robina, miampy fahaiza-manao vaovao nampiana: milomano sy mitsambikina ambonin'ny rindrina.
Ho fanampin'izany dia nampiana efijery misy antontan'isa momba ny fivoaran'ny lalao, nampiana mpitsikilo loko ny mpanonta ary nampiharina ny interface mba hanatsorana ny famoronana plugins.
Sarintany nohavaozina avy amin'ny "Revenge on Redmond".
Lalana nohavaozina sy sarintany an'ny antoko fahatelo maro.
Nanomboka ny fananganana fivoriambe ofisialy ho an'ny FreeBSD, 32-bit Linux ary Ubuntu Touch.
Napetraka ny fiantraikan'ny fiovan'ny fotoana ho an'ny sarintany.
Efa nomena ny safidy handingana ny efijery fandraisana.
Ny tonian-dahatsoratra dia mampihatra ny maodely log de change automatique amin'ny fotoana tsy tapaka.
Nampiharina ny fampidirana Discord safidy.
Farany, raha liana ny hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, momba ity dikan-teny vaovao ity dia azonao jerena ny antsipiriany ao ity rohy manaraka ity.
Ahoana ny fametrahana SuperTux amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fametrahana ny kinova vaovao amin'ity lalao malaza ity dia tokony ho fantatr'izy ireo izany SuperTux dia zaraina amin'ny fananganana manokana ho an'ny rafitra fiasa Linux (AppImage sy Flatpak), Windows sy macOS.
Ka raha ny rafitra misy antsika dia Ubuntu na avy amin'izany, azontsika atao ny misintona ny fisie AppImage manome alalana famonoana anao fotsiny ary afaka mankafy ity lalao mampiala voly ity.
Ny rakitra AppImage dia azo raisina avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa, na dia ho an'ireo izay tia azy aza dia afaka manokatra terminal izy ireo ary mahazo ilay rakitra miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Raha vantany vao vita ny fampidinana dia tsy maintsy manome alalana famonoana ho azy isika. Azontsika atao izany amin'ny terminal amin'ny alàlan'ny fampiharana ity baiko manaraka ity ao aminy:
Ny safidy amin'ny sary amin'ity fomba ity dia ny manindry havanana amin'ny fonosana ary tsy manome alalana mamaky sy manoratra ho an'ny mpampiasa fotsiny, fa jereo koa ny boaty " Avelao hihazakazaka ny rakitra ho programa azo tanterahina”Mitahiry azy isika ary manidy azy.
Avy eo dia tsindrio indroa eo amin'ny fonosana ary hanomboka ny fanatanterahana ny programa.
Ary farany Izy ireo dia ho afaka manatanteraka ny fisie amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa amin'ny rakitra na avy amin'ny fantsona iray ihany miaraka ny baiko:
ankehitriny, ho an'ireo izay tia mampiasa fonosana Flatpak tsy maintsy manana fanohanana an'ity karazana fonosana ity nanampy azy ireo fotsiny izy ireo. Ary ny fametrahana an'ity kinova SuperTux vaovao ity dia azo atao amin'ny terminal amin'ny fampiharana ity baiko manaraka ity:
Ary koa, satria mbola tsy vita ny lalao dia mbola misy ny fanavaozana azo raisina, ka azonao atao ny manamarina raha misy dikan-teny vaovao miaraka amin'ity baiko manaraka ity: flatpak –user update org.supertuxproject.SuperTux
Ary voila, afaka manomboka mankafy ity lalao ity ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » Ny SuperTux 0.6.3 dia tonga miaraka amin'ny fanohanana ny WebAssembly, fanatsarana ary maro hafa